Raysul Wasaaraha Itoobiya: Gaashaanka dhulka dhigi meyno Inta Alshabaab Jiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Addis Ababa – Mareeg.com: Raysul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaaa sheegay in Itoobiya aysan gaashaanka dhulka dhigi doonin inta Alshabaab ka jiraan dalalka Geeska Afrika.
Hailemariam Desalegn oo ka hadlay ciidamadiisa oo ku biiray howlgalka Midowgaq Afrika ee AMISOM ayaa sheegay iney arrintaas ugu tilaabsadeen sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dagaalka Al-shabaab looga saarayo deegaannada ay kaga sugan yihiin Soomaaliya.
Raysul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn oo la hadlay warbaahinta dalkiisa ayaa xusay in Itoobiya xilli kasta u taagan tahay sidii ay isaga difaaci laheyd Alshabaab oo khatar ku ah amaanka dalkiisa, sida uu yiri.
“Waxaan nasoo gaaray warar sheegaya in Al-shabaab ay doonayso inay weerarro argagaxiso ka geysato dalkeenna maadaama aan ka mid noqonnay AMISOM, balse waxaan diyaar u nahay inaan ka hortagno weerar walba oo Al-shabaab nooga yimaada” ayuu yiri Raysul wasaaraha dalka Itoobiya, Desalegn.
Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in ciidamadooda ka mid noqday AMISOM ay tiradoodu tahay 4,000 oo askari, ayna ka howlgeli doonaan gobollada dhexe iyo kuwa Koonfureed ee Soomaaliya.
“Askarteennu waxay ka qaybqaadanayaan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, waxayna howlgalkooda ugu horreeya ka billaabayaan gobollada dhexe” ayuu yiri Hailemariam Desalegn.
Hailemariam Desaleing Desalegn oo intaas ku daray in deegaannada ay ku wajahan yihiin ciidamadoodas ay ka mid tahay degmada Ceelbuur oo ay ka taliso xarkada Al-shabaab.
Hadalka kazoo yeeray Raysul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa kusoo beegmay iyadoo 24-kii saac ee lasoo dhaafay labo qeyb oo ka mid ah ciidamada Itoobiya gaareen gobolka Galgaduud, gaar ahaan Dhuusamareeb iyo Guriceel.